Nisy nanafika ny VIVA Ambodivona | GAZETY_ADALADALA
Nisy nanafika ny VIVA Ambodivona
Posted on 19/07/2009 by gazetyavylavitra
Mirongatra indray ny herisetra eto Antananarivo raha ny vaovao tselatra navoakan’ny RNM vao henoko teo no itarafana azy. Nambara tamin’izany fa olona 20 mahery no nanafika ny RADIO VIVA Ambodivona. Nisy ny maty sy ny naratra.
Tsy mbola ananako ny andinindininy fa vao avy any am-piangonana mihitsy aho no naheno ny vaovao. Ampitaina amintsika eto ihany araka ny filatsahan’ny vaovao isan-karazany ny tohiny.
2 maty (agents de sécurité Pro Guard iray sy SSTIM iray hafa), iray naratra mafy. Nirongo fiadiana mahery vaika ny mpanafika
3h 30 maraina no nitranga ny fanafihana ka kalachnikov, lance roquette sy basy mahery vaika no nifanandrinany tamin’ny miaramila mpiambina. Nalaina daholo ny portables an’ny mpiambina, rehefa avy nahafty roa tamin’ireto farany ny mpanafika. Ny maty voalohany dia ilay agent de sécurité nanontany azy ireo ny fiaviany sy ny anton-diany. Tonga dia tifitra teo amin’ny lohany sy ny kobony no setrin’ny fanontaniana sy solon’ny valim-panontaniana. Misy ny feon’ny fanazavan’ny mpiambina ny Shoprite sy ny olon-tsotra nanatri-maso ny zava-nitranga teny an-toerana saingy noho ity version WordPress misy ahy ity toa mananihany dia tsy mety miakatra mihitsy ilay izy. Mbola mijery ny fomba hametrahako azy eto ho anareo aho.
Araka ny tatitra nataon’ny Colonel RAVALOMANANA Richard nandeha tao amin’ny TVM androany hariva dia nofenoina sakana (barrages) ny lalana rehetra mitondra mankany amin’ny VIVA iny alina iny (fasika natao tanaty gony). Nisy ny Baomba nentin’olona tanaty fiara – ka nipoaka tamin’ilay nitondra azy ihany- teny Ambohibao. Rehefa nosavaina io dia nahitana plan misy ny sampanana rehetra mitondra mankao amin’ny VIVA Ambodivona tany aminy ary misy ny sarin’ireo sakana rehetra natao teny amin’ny lalana.
Ankoatra ireo dia nisy baomba ihany koa hita tany amin’ny Toby 1er RFI Ivato sy tany amin’ny Gendarmerie Fort Duschesne. Miaramila Caporal no specialiste ananan’ny tafika malagasy manala ireny zava-mipoaka ireny, saingy ity no tena nampivarahontsana ahy nijery ny sary tao amin’ny fahitalavitra androany alina: gants fotsiny no entin’ilay ranamana manala (desamorçage) ireny baomba ireny. Nefa raha any ampita dia iarahan’ny rehetra mahita sy mahalala fa olona telo na roa fara-faharatsiny no miaraka, ary mbola mitondra karazana’ampinga be hiarovana ny tava sy ny tena manontolo koa aza. Raha sanatria tokoa moa izany ka amin’iny fotoana ikirakiran’ilay caporal ny zava-mipoaka iny no misy mi-bip tampoka ilay portable natao ho declencheur, dia mba ahoana ? Sa dia izany tokoa no hoe ‘maty ho an’ny tanindrazana?’
Rehefa natao fanadihadiana ireo tratry ny zava-nipoaka tao anatin’ilay fiara teny Ambohibao dia nanonona anaran’olona ambony teto amin’ny firenena sy nilaza koa fa mpamonjy fivoriana ao amin’ny MAGRO Ankorondrano avokoa.
Nilaza moa ny Colonel RAVALOMANANA Richard fa tena asa fampihorohoroana mikendry resaka ara-politika no kasaina hatao iny alina iny. Ary efa nisy ny trano nosavaina sy efa miroso tsikelikely amin’ny rehetra tokony hataony nhy zandary sy ny tafika manoloana iny azava-nitranga iny.
Raha mampita ity indray ny tenako dia aza raisina ho fankahalana tsotra izao ny ‘zanak’i dada’. Ny zavatra mba manitikitika ny saiko ankoatra nay zavatra niseho androany dia ity: ‘Mba lasa aiza i Ambroise e????’ Ilay mampanantena foana ny teny Ambohijatovo sy Ankorondrano fa efa ho avy i Dada ary efa tsy mitehaka amin’ny tany intsony ny tongony fa efa an-dalana hijery ny zanany izy (efa hatrany Ambohijatovo io tenin’ingahy Ambroise io an! – Sa rehefa hita fa tsy hety intsony ny tantana dia miketriketrika any ho any indray????
Mba ilazana rangahy ny rehetra a! Rehefa misy ny mampiahiahy, toy ny fisian’olona mitangorongorona, na fisian’ny sakana tsy fanta-pihaviana any ananonanona any, mba mifampilaza sy miantso mpiotandro filaminana haingana a! Aoka ho tadidy mandrakariva fa ny olona rehefa manao asa famphorohoroana toy izao dia tsy miraharaha na iza voa ao na iza – eny fa na ny any an-tranony aza no ho latsak’aina tsy nahy amin’izany- araka izany dia mety ho izaho, na ianao , na ny ao an-tranonao koa no ho voan’izany. Koa tsara ny mifampitsinjo sy mifampilaza amin’ny zavatra ratsy mety hiseho sy ketrehin’ny sasany toy izao
« Tadidiko ry zalahy e! Tamin’izany andro izany… Ho tombontsoan’iza anefa? »